Cameroon: Racfaanka, Maurice Kamto ayaa weli ku jira xabsiga - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY »Cameroon: Racfaan qaadashada, Maurice Kamto ayaa weli xabsiga ku jira - JeuneAfrique.com
Cameroon: Racfaan qaadashada, Maurice Kamto ayaa xabsiga ku jira - JeuneAfrique.com
dhaqdhaqaaqa 17 la xiray hore ee maxkamadda ee Yaounde, gudaha, taas oo la sameeyo, waxaa 9 April, rafcaanka racfaan xukunka gudbiyay hogaamiyaha MRC iyo xulafadooda siyaasadeed, diidmada codsiga sii daynta ku meelgaarka ah Maurice Kamto iyo saaxiibadiisa siyaasadeed.
Maxkamadda Garsoorka ee Gobolka ayaa go'aamisay go'aanka oo ay samaysay maxkamadda ugu horeysay ee 7 bishii Maarso hore, taas oo diiday - waa wax aan la yaab lahayn - codsiga ku-meel-gaadhka ah ee sii daayay Maurice Kamto iyo saaxiibadiisa siyaasadeed. Go'aanka waxaa la sameeyey tan April 9 maqnaashaha eedaysanayaasha, kuwaas oo diiday inay ka qaybqaataan waxa ay u arkaan inay yihiin "caddaalad darada cadaalada". Sidaas awgeed Maurice Kamto waxay doorbidday inay joogaan qolkiisa, xabsiga weyn ee Kondengui.
Dhegaystayaashu si kastaba ha ahaatee waa la qabtay sida dadwaynaha, sida uu dalbaday Maurice Kamto iyo eedeysanaha la eedeeyay. Laakiin qareenada difaaca iyo hoggaamiyeyaasha dhaqdhaqaaqa Cameroon Renaissance Movement ayaa ku cambaareeyay "machad" ka mid ah mas'uuliyiinta Yaoundé, oo ay ku eedeeyeen in ay qolka buuxsamayeen kooxo dawladeed.
Dadka u dhaqdhaqaaqa MRC waxay ka fogyihiin maxkamad
"Dhamaan dhaqdhaqaaqeyaasheena waxaa looga hortagi waayay in ay soo galaan qolka maxkamadaynta ee la soo buuxiyey. Waxay ka buuxiyeen askar dhar cad iyo dad kale si aan uga hortagno inaan ka qaybqaato, "ayuu yidhi Christopher Ndong, xoghayaha guud ee MRC, oo ku biiray Dhallinyarada Afrika.
"Marka la eego helitaanka maqalka ee dadweynaha, Maurice Kamto, eedeymaha iyo eedeymaha, waxaanu diidnay inaan aadno Maxkamadda, si aynaan iskugu xidhnayn weerarka - oo ka soo horjeeda raadadka xaq - in samaynayn xaakinnadii baa mas'uul ka ah kiiska, "ayuu yiri kooxdiisa ii Hyppolite Meli, mid ka mid ah qareennada difaaca.
Dhinaca kale, qalab ammaan oo muhiim ah ayaa la geeyay hareeraha maxkamadda, oo ay ilaalinayeen bilays badan oo hubaysan. Daraasiin dad ah oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa MRC, ayaa timid xilli hore, waxay ku sugnaayeen dhowr mitir oo ka soo wareegtey dhismahaan, taas oo aysan suuro gal ahayn in ay arkaan eedeeysanaha oo aan ka maqnayn.
Tallaabada xigta: Maxkamadda Milatariga Yaoundé
Qiyaastii saacadaha 11 (wakhtiga maxaliga ah), heesaha taageerada Maurice Kamto ayaa ka gilgilay dagaal yahaniinta MRC, inta badanna waxaa lagu soo ururiyey matxafka qaranka. Dabadeed waxay bilaabeen marxalad si dhaqso ah u kala jajabisay askar badan oo bilays, kuwaas oo xiray dadka 17, sida lagu sheegay tirooyinka la siiyey Dhallinyarada Afrika qareenada.
"Dadka la xiray waa la xirxiray. Wakiilka Handy (laga soo bilaabo lambarka Xarunta Dhexe 1, Qoraalka Diiwaanka) wuxuu inoo sheegay in uu marka hore tixraacayo madaxda sare inta aan dhageysiga bilaabmin haddii loo baahdo. Waxa uu na waydiistay inaan dib u soo laabano, "ayuu yiri ilo isku mid ah.
Iyada oo diidmadaan, inta kale ee Maurice Kamto ayaa la ciyaaray maxkamada millatariga ee Yaoundé, iyo Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ee Geneva, halkaas oo cabasho la soo gudbiyey by shirkadda Dupond-Moretti.
England: Sannad ka dib markii uu ka tagay City, Yaya Toure ayaa ku biiray Pep Guardiola
Dhibaatada Dhexe ee Bartamaha Afrika: gudaha iyo dibedda mar kale waxay ku barokacday xannaano yar